IVivo V15: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa ngokusemthethweni | I-Androidsis
I-Vivo V15: Ikhamera ebuyisekayo kunye nekhamera engasemva kathathu kolu luhlu luphakathi
UEder Ferreño | | IsiTshayina Android, Iiselfowuni
Ndiphilile iiveki ezimbalwa ndinemiboniso emininzi yemodeli. Uphawu lwaseTshayina lusandula ukusishiya ne U1, iVivo IQOO, ifowuni yokuqala yohlobo lwayo olutsha kunye kunye neV15 Pro, eza nekhamera erhoxisiweyo. Ngoku, uphawu lusishiya nomntakwabo omncinci wokugqibela. Njengoko bazise ngokusesikweni iVivo V15.
Le Vivo V15 ifikelela phakathi kuluhlu lophawu. Sijongene nefowuni enekhamera yangaphambili ebuyisa umva, esiba sisiqhelo kwintengiso. Ukongeza, ikhamera ephindwe kathathu isilindele ngasemva. Ngokubanzi, lelona banga lipheleleyo linomdla kunye nelinomdla esiboniswa luphawu.
Kule meko, Umsitho ububanjelwe eThailand. Abasishiyelanga iinkcukacha ezininzi malunga nokuqaliswa kwayo, ngaphandle kweemarike ezithile eAsia. Ke ngale ndlela yinto esinethemba lokuba nedatha eninzi kungekudala. Kungenxa yokuba ithembisa ukuba ngumnxeba ovelisa umdla kubasebenzisi abaninzi.
1 Iinkcukacha zeVivo V15
Iinkcukacha zeVivo V15
Kwinqanaba lobugcisa, le Vivo V15 yimodeli yodidi oluphakathi. Amagqabi aneenkcukacha ezingaphezulu kokumkelekileyo kolu luhlu. Ngokuqwalaselwa ngokukodwa ukufota kunye neekhamera zayo, ngaphambili nangaphandle kathathu emva kwekhamera esiyifumana kwisixhobo. Ngokwendlela yoyilo, ubukho bekhamera erhoxiswayo ikuvumela ukuba uthathe ithuba elingaphambili, kunye nezakhelo ezincinci kakhulu, ezihlala kwi-91% ngaphambili. Ukucaciswa kwefowuni:
IsikriniI-InCell eyi-6,5 intshi ene-FullHD + isisombululo kunye ne-19,5: 9 ratio
Inkqubo: Mediatek Helio P70
Cámara traseraNgasemva: 12MP kunye nokuvula f / 1.78 + 8MP ububanzi nge f / 2.2 + 5MP ngeferture f / 2.4
Ikhamera yangaphambiliI-32MP kunye nokuvula f / 2.0
Ibhetri: 4.000 mAh ngentlawulo ekhawulezayo
Conectividad: 4G, iBluetooth 4.2, irediyo ye-FM, i-GPS, i-OTG, i-WiFi 802.11 a / c, i-3.5 mm jack
Inkqubo yokusebenzaI-Android 9 Pie eneFuntouch OS 9
Ubukhulu: 161,97 x 75,93 x 8,54mm
U bunzima: Iigram ezili-185,9
Inkampani ihlawule ngokukodwa ukufota kule Vivo V15. Basishiya neekhamera zangemva ezintathu, ngokungathandabuzekiyo ezithembisa ukunika intsebenzo elungileyo. Inkampani isebenzise indibaniselwano yeelensi, ukuze zikwazi ukuziqhelanisa nazo zonke iintlobo zeemeko ngendlela elula. Ubukrelekrele bokwenza buye baziswa kubo, eya kuthi yonyuse ukusebenza kwayo ngawo onke amaxesha, yazise iindlela ezongezelelweyo zokufota kuzo.
Ukukhethwa kweprosesa kwifowuni yinto ekunokwenzeka ukuba uninzi ayithandi. Njengoko le Vivo V15 ifika neHelio P70 evela kwiMediaTek ngaphakathi. Ayisiyiyo iprosesa embi, kodwa abasebenzisi abaninzi abanamfanekiso mhle wezi processor. Kwelinye icala, ukhetho lwe-6 GB ye-RAM luyamangalisa, olunesisa kakhulu kolu luhlu. Ubungakanani obuphezulu obuphezulu. Sine-128GB yogcino lwangaphakathi.
Kwelinye icala, ibhetri yenye yamandla oluluhlu oluphakathi. Ibhetri enkulu, ene-4.000 mAh umthamo. Ndicinga ke ngoko ukunika inkululeko elungileyo kubasebenzisi ngawo onke amaxesha. Ukongeza, uphawu lwaseTshayina luye lwazisa intlawulo ephindwe kabini kuyo. Ke sinokuyihlawulisa ifowuni kwimizuzu embalwa ngendlela efanelekileyo. Njengenkqubo yokusebenza, sele iphehlelelwe ngePie ye-Android ngokwendalo, isebenzisa i-Funtouch OS 9 yokwenza ulungelelwaniso.
Njengoko besesitshilo ngaphambili, ifowuni ibonisiwe eThailand. Okwangoku, iqinisekisiwe ukwaziswa kwayo kwiimarike ezithile eAsia, kubandakanya iThailand, iCambodia neMalaysia. Kodwa asazi ngakumbi, nangona kulindeleke ukuba kungekudala iza kufika e-China. Akukho nto yaziwayo malunga nokuqaliswa kwayo eYurophu.
Le Vivo V15 isungula ngokudibanisa enye ye-RAM kunye nokugcinwa. E-Thailand iza ngexabiso le-10.999 Thai baht, emalunga nee-305 zeerandi zokutshintsha. Nangona kwimeko yokwaziswa eYurophu, ngokuqinisekileyo ixabiso layo liya kuba phezulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Vivo V15: Ikhamera ebuyisekayo kunye nekhamera engasemva kathathu kolu luhlu luphakathi
Isikhumba seFortnite Galaxy siya kufumaneka kude kube ngoMatshi 7
Ungalitshintsha njani igama lomfowunelwa kuWhatsApp